Mogadishu Journal » C/xakiin Xaaji Fiqi’’ sadaxda sano ee soo socta waxaan dhisi doonaan ciidamo tayo leh oo leysku haleyn karo
Mjournal :- – Wasaarrada gaashaandhiga ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay sidii ay dib ugu dhisi lahayd ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirrka gaashaandhiga xukuumada Soomaaliya C/xakiin Xaaji Max’uud.
Wasiirka ayaa tilmaamay in wasaaradiisa ay qorshaynayso in ay dhisto ciidamo gaaraya 28 kun oo ay u dhamaystiran yihiin qalabkooda iyo taakulanta ay u baahan yihiin kuwaas oo ay shacabka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan.
“Waxaa uu qorshaheenu yahay in mudada sadaxda sano ee soo socta in aan dhisno ciidamo taye leh oo leysku haleyn karo, gaar ahaan waxaa soo dhameystiri doonaan dhamaan agabka iyo waliba tasiilaadka ay u baahan yihiin ciidamada,’’ ayuu yiri wasiirrka gaashaandhiga.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa xusay in ciidamada ay hadda dowladda Soomaaliya haysato aysan hanan karin ammaanka dalka wuxuuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay muhiimadda gaar ah siinaydo sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo awood u leh inay hantaan ammaanka dalka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata mid dhibaato xoog leh ay ka heysato sidii ay tayeeyn laheyd ciidamad qalabka sida ee Soomaaliya looga fadhiyo in ay marka danbe kala wareegaan ciidamada AMISOM sugida nabad-galyada.